ब्रह्मांड एक अनुकार हो: सबै धर्म, हरेक विश्वास प्रणाली धोखा छ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईंले हेर्नु भएको सबै चीजले मात्र भौतिकता दिन्छ? यसले लगभग एक शताब्दी पुरानो प्रयोग डबल डबल (डबल खुल्ला) प्रयोग भनिन्छ। विश्वव्यापी क्वांटम फिजिस्टिस्टहरूले यस प्रयोग सैकड़ों पटक प्रयोग गरेका छन्, किनभने यो धेरै कष्टको कारण र त्यस्ता महान आश्चर्यलाग्दो समयमा। यो एक खोज हो कि पृथ्वी को गोल को खोज देखि अधिक प्रभावशाली प्रभाव हो। तथापि, वैज्ञानिकहरू त्यस मूल्यमा प्रयोगको वास्तविक अर्थ अनुमान गर्न सक्षम भएन। पहिला तल प्रयोग गर्नुहोस् जुन प्रयोग वास्तवमा भनेको हो, त्यस पछि पत्ता लगाउनुहोस् किन यो प्रयोगले सबै कुरा व्याख्यात्मक हुन साबित गर्दछ।
राम्रो बुझ्नको लागी तपाईंलाई लहरहरु बारे केहि जान्न आवश्यक छ। जीवनमा धेरै चीजहरू लहर चलिरहेका हुन्छन्। आवाज एक लहर गति हो। शब्द वा कम्पनेशन पनि प्रयोग गरिन्छ। एक गिटार स्ट्रिङ कम्पन वा भाइब्रेट गर्दा तपाइँले निश्चित टोन सुन्नु भयो। हल्का (भाइब्रेट) तपाईंको स्टेरियो प्रणालीको स्पिकरहरूको झिल्लीले तपाईंलाई सुनिरहेको छ। बस एउटा संगीत कार्यक्रममा एक बक्सको लागि जानुहोस् र तपाईं आफ्नो शरीर मार्फत बासको कम्पन लगाउनुहुनेछ। लहरहरूले एक अर्कालाई अझ बलियो बनाउन वा विस्तार गर्न सक्छ। तल चित्रले त्यस्तै लहरहरूका दुई चोटहरू एकअर्कालाई बलियो बनाउँछ (बायाँ) र लहरहरू जुनको माथिल्लो र घाटी सिंक्रोनाइज (दाँया) तुरुन्तै एकअर्कालाई रद्द गर्नुहोस्।
प्रयोग जुन वैज्ञानिक संसारमा ठूलो झटका असरको कारणले 'द डबल स्लिट्स प्रयोग' (नि: शुल्क रूपमा अनुवाद गरिएको: 'डबल स्लिट' प्रयोग) अन्तर्गत जान्छ। म यस प्रयोगको व्याख्या गर्न चाहन्छु जुन सबैलाई स्पष्ट छ।
सुरु गर्नका लागि, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि वैज्ञानिकहरूले लामो सोचेको छ कि कुरा 'ठोस' केहि हो। एक परमाणु वरपर वरपर विद्युत्हरूसँग एक कोर हुन्छ। सबै कणहरु जुन एक परमाणु बनाइयो ठोस हुन मानिन्छ। 'डबल स्लिट्स प्रयोग' एक प्रयोग हो जुन केहि व्याख्या पहिले पहिला चाहिन्छ, तर यस बीचमा मैले ध्यान दिएँ कि मैले 'कुरा' र यसको सार्थक ठोस रूपको बारेमा के भन्थे।
द डबल स्लिट्स प्रयोग
यदि तपाईंले एक पिंग-पोंग बल बन्दूकको बीचमा एक प्लेटको साथ बीचमा दुई स्लॉटको साथमा राख्नुभयो भने, ढाँचा पर्खालमा देखा पर्नेछ जस्तो कि तपाईंले बाँयामा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै एक गोल्फरले तपाईंलाई यादृच्छिक बलहरू हिसाब दिन्छ जुन केवल पर्खालहरू बीचको स्लॉटको माध्यमबाट पासपोर्ट भेट्टाउँछ, एक ढाँचामा नतिजा जस्तै पछाडि पर्खालमा देखिन्छन्। तपाईंको ठोस मुद्दा दुई स्लॉट मार्फत जब तपाईले पुस्तक बुक गर्नुहोला पछि पर्खालमा दुई समानांतर स्ट्रिपहरू छन्।
तपाईं नै प्रयोग एक लहर-जस्तो आन्दोलन संग, त्यसैले उदाहरणका लागि, पानी संग, छालहरू वा ध्वनि छालहरू के गर्छन्, परिणाम पछिल्लो भित्तामा एक पूर्ण बिभिन्न ढाँचा छ। तपाईं विभाजन मा एक तरङ्ग फेंकता र यो स्लट मार्फत जान बाध्य छ त्यसैले गर्दा, यो विभाजन पछि केही अंक मा प्रत्येक अन्य अझ र (माथि दायाँ छवि व्याख्या रूपमा) दुई छालहरू अन्य अंक मा बाहिर नम कि उत्पत्ति छन् जस्तो देखिन्छ। यसले पछिल्ला पर्खालमा ढाँचा सिर्जना गर्दछ जुन तपाईले पाउँदा कुन कुराबाट पुरा तरिकाले भिन्न हुन्छ जब तपाइँले स्लॉटमा ठोस कुरा ठोक्नुहुन्छ। यसले परिणामको पछाडि दुईवटा ठूला पर्खालहरूमा परिणत गर्यो। तलको छविले तपाईँले छविमा दुई स्लटहरूको साथमा पर्खालको गति पठाउनुहुँदा छवि देखाउँदछ।
अब ठूलो आश्चर्यलाग्दो छ कि वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउँदा तिनीहरूले प्रयोग गरेमा एकै प्रयोग प्रयोग गरे। आशा थियो कि ठोस मुद्दा गोल्फ बलहरु को पछि पर्खाल मा दुई धार को रूप मा एक नै प्रभाव उत्पन्न हुनेछ। अब सम्म यो महसुस गरिएको थियो कि कुरा 'ठोस' केहि हो। सबैको आश्चर्यको लागी, ठोस कणहरू बाहिर गए - इलेक्ट्रोन्स - तथापि, पछाडि आन्तरिक गतिको परिणामको ढाँचा देखाउन को लागी। प्रयोग गर्दा मापन गर्दा पनि एकदम बढि अचम्म उठ्यो। आखिर, मापन जान जान्छ। यस अन्तको लागि, सेन्सरहरूलाई स्लॉटमा राखियो, त्यसैले कसैले देख्न सक्दछ कि कुन विद्युतको बिरुद्धको स्टोटको माध्यमबाट। उदाहरणका लागि, यो सबै इलेक्ट्रोन्सहरू मापन गर्न सम्भव थियो जुन स्टोट हुँदै गएका थियौं र यसैले तिनीहरू पछाडि पर्खालमा समाप्त हुनुपर्दछ कि। चौंरीको परिणाम थियो, किनकि माप, अचानक हस्तक्षेप पछाडि पछि पर्खाल (जस्तै तरंगहरू जस्तै) अब अब उठ्यो, तर ठोस कुरा भएको ढाँचा।
प्रयोग विस्तार भयो। प्रयोग 102 पटक सम्पन्न भएको थियो र प्रत्येक परिणामले दुई साना लिफाहरू समावेश गरेको ठूलो सील लिफाफेमा गरे। एक सानो लिफा (ठूलो ठूलो भित्र भित्र) ले स्लॉट को माध्यम ले गुजारा इलेक्ट्रन को मापन परिणाम समाहित गर्यो। अर्को सानो पछाडि पर्खालमा ढाँचा लिफ्ट गर्नुहोस्। श्रृंखलाबाट पहिलो र अन्तिम लिफ्ट खोल्दा, दुवै साना लिफाहरू खोलिएका थिए। विभाजनको मापनको परिणाम र पछाडि पर्खालमा ढाँचाको जाँच गरियो। दुवै अवस्थामा एउटै पछाडिको पछाडिको ढाँचा जुन दुई समानांतर रेखाहरूसँग मेल खान्छ जुन तपाईं ठोस कुराको लागि आशा गर्नुहुन्छ। 100 ठूलो लिफाहरू बाँकी रहेका 50 को दुई समूहमा विभाजित गरियो। पहिलो 50 लिफाफेको मापन परिणाम ठूलो लिफाबाट हटाइएको थियो र हेरिएको। पछि, पछाडिको पर्खाल नतिजाको जाँच गरियो र प्रत्येक समय दुई समानांतर रेखाहरूको ढाँचा दृश्यात्मक थियो। अन्य केहि अन्य 50 लिफाजहरूसँग गरियो। माप परिणाम जलाइयो र यसैले देखिएन। त्यसपछि पछाडिको पर्खाल लिफाफेबाट लिइएको थियो। र तपाईले के सोच्नुहुन्छ के यो मा देखिने थियो? सायद, एक लहर आन्दोलनको सन्दर्भमा ढाँचा।
तपाईं म जस्तो लाग्यो र शायद सोच्न सक्नुहुनेछ: "होइन, यो सम्भव छैन, काममा एक भ्रमज्ञ हुनु पर्छ।"होईन, हामी गम्भीर वैज्ञानिक प्रयोगको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं जुन त्यस कारणको लागि त्यसोभयो। मानिसहरूले यसलाई विश्वास गर्न सक्छन्। यसको मतलब यो छ कि जब इलेक्ट्रोन मात्र एक निश्चित फारम मा लिन्छ। यस क्षणमा मापन परिणामहरू (देख्न सकिँदैन) मा देखिन सकिँदैन - भित्री प्रयोग अघि अघि - विद्युत्ले कम्पनको गैर-निश्चित रूपमा प्रकट गर्दछ। वाह! त्यो एक क्रान्तित्मक खोज हो। त्यसोभए हामी हेरौं जब हामी सबैलाई निश्चित हुन्छ। "तर यो कसरी सम्भव छ? हामी संसारमा बस्छौँ जहाँ हामी वरिपरि सबै कुरा निश्चित छ? के यो ठोस छ? म यसलाई ठीक देख्छु?"
तपाईं सिमुलेशनमा बस्नुहुन्छ
वैज्ञानिकहरूले यस प्रयोग र नतिजाहरूको बारेमा आफ्नो टाउको तोडेका छन् तर बरु समस्यालाई झूट दिन्छन् किनभने अल्बर्ट आइन्स्टीन दशैंका लागि संलग्न छन् र यो पनि समावेश गर्न सकिएन। तिनीहरूले विषयहरू खोजी गर्न चाहन्छन् जुन तिनीहरूले स्कोर गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत रूपमा, म वर्षको लागि कल गरिरहेको छु कि यस घटनाले ब्रह्माण्ड अनुकार हो भन्ने तथ्यले वर्णन गरेको छ। यो हप्ता मैले एक पाठकको प्रतिक्रियाको माध्यमबाट पत्ता लगाएको छु, कि त्यहाँ एक प्राकृतिक वैज्ञानिक पनि भन्छिन्। उनको नाम टम कैम्पबेल हो। क्याम्म्पबेलले यसलाई डबल स्लिट्स प्रयोगको अझ बढी संस्करणको माध्यमद्वारा (PDF को रूपमा यहाँ पढ्नुहोस्) यो ठोस बनाएको छ कि हामी एक अनुकरणमा रहछौं। वास्तवमा, उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, म देख्छु कि प्रस्ताव को बारे मा पनि स्पष्ट छ कि हामी अनुकार मा रहछन। यद्यपि, म उहाँबाट एक कदम अगाडी जान्छु र मानौं कि हामी स्पष्ट रूपमा पूर्व-कार्यक्रम अनुकारमा बस्छौं।
'सिमुलेसन' को अवधारणामा प्रयोग गर्न, यो सम्भवतया अनलाइन गेमसँग तुलना गर्न सबै भन्दा राम्रो हो। आजको प्लेस्टेशनको साथ तपाइँ अनलाइन खेल खेल्नु र पूर्ण भर्चुअल संसारमा अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईंसँग असीमित स्वतन्त्रताको गति र विकल्प विकल्पहरू छन्। त्यो पनि तपाईंको पीसी मा गर्न सकिन्छ, तर यस्तो प्लेस्टेशन शायद सबै भन्दा आकर्षक उदाहरण हो। अब तपाईं बटनहरू सञ्चालन गर्न र एउटा ठूलो टिभि स्क्रिन हेर्नु हुन्छ। चाँडै तपाईं 3D VR चश्मे पहनु हुनेछ र यो धेरै यथार्थवादी हुनेछ। यस समय, हामी पहिले देखि नै सबै प्रकारका उपकरणहरुमा कडा परिश्रम गर्दैछौं जसले मस्तिष्क गतिविधि उत्पन्न गर्दछ जुन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम संग अन्तरक्रिया गरेर तपाईंको मस्तिष्क तरंगहरू उठाउँदछ। तपाईं यसैले प्रत्यक्ष रूपमा मस्तिष्कबाट जानकारी उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि हामी घटनाहरू पछ्याउँदछौं भने, केही वर्ष भित्र हामी पनि बिन्दुमा पुग्यौं जहाँ मस्तिष्कसँग सम्पर्क प्रत्यक्ष रूपमा लिन सकिन्छ र हामी क्लाउडमा कम्प्युटिङ वा मेमोरी क्षमता खरीद गर्न सक्छौं। चाँडै हामी हाम्रो मस्तिष्कमा केन्द्रहरू ल्याउन सक्छौं जहाँ सबै संवेदी धारणा हुन्छ। हामी यसैले गन्ध, स्पर्श, सुन्दरी र दृष्टिलाई मात्र मस्तिष्कमा प्रोजेक्ट गर्न सक्दछौं। तपाईं अरू कसैको भावना महसुस गर्न सक्नुहुन्छ वा कसैको सपना देख्न सक्नुहुन्छ। एकपटक दिमाग जडान एक तथ्य हो भने, तपाईं आभासी संसारहरू प्रत्यक्ष रूपमा मस्तिष्कमा खेलको रूपमा प्रक्षेपण गर्न सक्नुहुन्छ र यसैले गन्ध, स्पर्श, दुखाइ, डर, आनन्द र अन्य सबै संवेदना धारणालाई जीवनभरको तरिकामा अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसपछि तपाईं पारित, जस्तै यो थियो, आंख, कान, नाक, तपाईंको छालामा तंत्रिका र तपाईं यसलाई नाम।
त्यसपछि तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कि मस्तिष्क आभासी संसारको पर्यवेक्षक बन्छ। हाम्रो मस्तिष्कको साथ हाम्रो शरीर फेरि वास्तविक हुनको लागी एक आभासी संसार अनुभव गर्न सक्छ। यद्यपि, यदि हामी डबल स्लिट्स प्रयोगमा फर्केर हेर्छौं, त्यसपछि त्यस शरीर पनि र मस्तिष्क कुरा हो। केवल र केवल अवलोकन को एक परिणाम को रूप मा भौतिकी। त्यस सन्दर्भमा, त्यस प्लेस्टेशनमा फिर्ता सोच्नुहोस्। यसमा तपाइँ एक खेलाडी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ: अवतार। यदि तपाईं खेल केही घण्टा घडी खेल गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लगभग अवतारको साथमा पहिचान गर्नुहुनेछ (विशेषगरि यदि तपाइँ सधैँ पनि एकै छान्नुहोस्)। तपाईंसँग हो, जस्तो कि थिए, तपाईं खेलमा बस्ने महसुस र अवतार हुनुहुन्छ। त्यो चाँडै 3D VR चश्मा संग पनि अधिक मामला हुनेछ, तर खेल मस्तिष्क मा सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ भने, यो तपाईं खेल बस्ने कि अवतार र भावना संग पहिचान गर्न छैन कठिन हुन सक्छ । यो ठीक छ स्थिति हामी अहिले हो। हाम्रो आत्माले यस खेललाई बुझ्दछ र यो 'वास्तविकता' को माध्यम ले अवलोकन गर्दछ। ब्रह्माई हो, जस्तै यो थियो, स्क्रीनमा खेलको रूपमा सिर्जना गरियो।
कम्प्युटिङ पावरलाई बचत गर्न, तपाइँलाई खेलमा छवि सिर्जना गर्न नभएसम्म छवि सिर्जना गर्न आवश्यक छैन। यसले ठूलो कम्प्युटिंग पावर बचत गर्छ। यदि तपाइँसँग बहु-खेलाडी खेल (हाम्रो जस्तै) यो उपयोगी छ कि एकै भौतिक रूपमा डेटा एकैपरिवर्तित बनी रहन्छ, ताकि प्रत्येक दर्शकले त्यहि कुरा देखाउँछ। त्यो प्रोग्रामिंगमा एक प्रकारको आधारभूत नियम हो।
अनुसन्धानको वर्षले मलाई निष्कर्ष निकालेको छ कि हामी केवल त्यस्ता सिमुलेशनमा रहन सक्दैनौं, तर एक सिमुलेशनमा स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट बिल्डरसँग पनि। अब मैले तपाईलाई सोच्दै सुनेको छु: "हो, तर हामीसँग स्पष्ट प्रमाण छ कि पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति र एक विकासवादी प्रक्रिया मार्फत ब्रह्माण्ड छ"। मलाई त निम्न प्रश्न सोध्न गरौं: तपाईं प्रोग्रामर को टोली एक सोनी प्लेस्टेशन खेल समावेश गरिएको थियो मानौं। के तपाईं सबै प्रकारको उत्पत्ति सिद्धान्त र इतिहास पूर्ण रूपमा कार्यक्रम गर्न सक्षम हुनुहुन्न? त्यसपछि तपाईं बस मात्र सबै जानकारी खेलको प्रोग्रामर द्वारा लेखिएको छ पत्ता लगाउन थियो तपाईं त खेल को भाग हो र आफ्नो खेल संसारको विकास मा अनुसन्धान गर्न तपाईंको सँगी खेलाडीहरू दिन कल्पना? मान्नुहोस् कि तपाईंले पत्ता लगाउनुभयो कि तपाइँको ब्रह्माण्ड अनंत छ र तपाईले जहाँ पनि तपाईलाई नयाँ आकाशगंगाहरू खोज्नुहुन्छ। के हुन सक्छ कि यी प्रणालीहरू तिनीहरू चाँडै नै तिनीहरूलाई सिर्जना गरी सिर्जना गरिन्छन्, किनकि सफ्टवेयर यस्तो लेखिएको छ? आफ्नो ब्रह्माण्ड आफ्नो खेल अचानक सुरु भएको छ जब यो त्यहाँ कहिल्यै समय थियो कि निष्कर्षमा केही बिन्दुमा तपाईं हुन सक्छ? र के तपाईं यसलाई ठूलो-बुबा भन्नुहुन्छ किनकि तपाईं यसको लागि अर्को व्याख्या पाउन सक्नुहुन्न? अथवा तपाइँ यसलाई ब्ल्याक होल कल गर्नुहुन्छ? तपाईं अनुमान लगाउँदै र जवाफ खोज्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईले कहिल्यै थाहा पाउनुभन्दा शुरुवात बिन्दु थियो। त्यो क्षण खेल खेलिएको थियो।
यो खेल को अवलोकन देखि Forensics, को अभिनय दृष्टिकोण (बरु मलाई म यो खेल रमाइलो जो अवतार संग पहिचान गर्न) बाट, म निष्कर्षमा आउने छु त्यहाँ केही कुराहरू खेलाडीहरू भूल गर्न डिजाइन प्ले छन् कि कि तिनीहरू केवल पर्यवेक्षक / खेलाडी हुन्। यस अर्थमा, खेल यति वास्तविक रूपमा निर्माण गरिएको छ कि यो जस्तो देखिन्छ धेरै लक्ष्य यो बिर्सनु हो कि तपाई को होतपाईं एक अभिनय आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईंको मूल यस भ्रम (या 'एक साथ' मा र बाहिर 'बाहिर),' superposition 'को क्वांटम भौतिक सिद्धान्तको कारण हो; जस्तै तपाईं प्लेस्टेशन खेल खेल्नु हुन्छ, नबिर्सनुहोस् कि तपाइँ त्यस स्क्रीनमा हुनुहुन्न र केवल तपाईंको हातमा एक यन्त्र छ। तपाईं खेलाडी हुनुहुन्न तपाईं अवतार छैन: तपाईं एक पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ। यो पनि लाग््छ कि यस खेल भित्र तपाईं आफ्नो बच्चा अवतार को भौतिकीकरण बाट क्रमादेशित गर्दै छन् जुन मिशन हो तपाईलाई बिर्सनु भएको छ कि तपाई एक पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ खेलमा अवतारहरू छन् जुन यस प्रक्रियालाई नियन्त्रण र मनिटर गर्ने उद्देश्य। त्यहाँ एक स्पष्ट लिपि जस्तो देखिन्छ जुन खेलमा सबै कुरा राख्छ तपाई वास्तवमा बिर्सनु भएको बिचारएक अभिनय आत्मा।
धर्म यस मा एक प्रमुख भूमिका खेल्दैछ। र त्यस धर्ममा तपाईं यो आत्मा भित्र यो आत्मालाई प्रोत्साहन दिइरहनुभएको छ, जस्तै यो एक देवता सम्म। त्यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अधिकतमिम जस्तो देखिन्छ, सधैं डरको जवाफ दिन्छ। यो अधिकतम अधिकतम लगातार उभरते सिद्धान्त मा आधारित छ 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'। अवतार खेलाडीहरू समस्यासँग प्रस्तुत हुन्छन् (समस्या), को कारण उनलाई डर मा गिरने (प्रतिक्रिया)। त्यो डरले खेल भित्रको अवतारबाट बढेको छ कि, जस्तै यो थियो, खेल-बिल्डरको तिर यो प्रक्रियाको निगरानी। व्यावहारिक उदाहरण चर्चहरू हुन् जुन बिल्डर, मृत्यु र नर्क वा मिडियाको डरलाई बढावा दिन्छ जुन बिल्डरको लिपिको रक्षा गर्ने सरकारी अवतारहरूको आत्मनिर्माणको डरलाग्दो डर। समाधान सधैं दर्शकहरु को समूह देखि अधिक नियंत्रण मा पाईन्छ जो गेम को निगरानी गर्दछ र जसलाई प्रक्रिया को निगरानी गर्दछ; प्रक्रियामा खेलाडीहरूले भ्रममा अधिक र अधिक गुमाएका छन् र आफ्नो आत्मा अवतार समूहको सेवामा राख्छन् जुन प्रदान गरिएको प्रस्ताव प्रदान गर्दछ (समाधान)। पाप, नरक र मृत्युको अवस्थामा, त्यो धर्मको मार्ग हो, जहाँ मंत्री वा इम्यामले तपाइँलाई समाधान प्रदान गर्दछ: स्वर्ग, अनन्त जीवन र छुटकाराको बाटो। त्यो पादरी-अवतारले धेरै प्रयास गर्न पर्थ्यो, किनकि अवतार जो तपाईंको बच्चा-अवतार खेल्नु भएको छ पहिले नै एक निश्चित विश्वास प्रणालीमा प्रोग्रामिंग गर्दै छन्।
यो देखिन्छ कि यस खेल भित्र पनि जान्दछ जुन जान्दर्भिक निर्मित विभेदहरूको। चलो असल मान्छे खराब मान्छे सिद्धान्त भन्नुहोस्। यो संधै हेगेलियन डायबिटिकको विरोधाभास हो जसले अराजकताको नेतृत्व गर्नु पर्छ, त्यस अराजकताबाट नयाँ अर्डर सिर्जना गर्न। त्यसैले तपाईसँग राजनीतिक, धार्मिक र जातीय मतभेदहरू छन् जुन एकअर्का विरुद्ध सम्पूर्ण अवतार-जनजातिहरू स्थापित गर्न प्रयोग गरिन्छ। र तिनीहरू यसको लागि संवेदनशील हुन्छन्, किनकि बच्चा अवतारबाट उनीहरूलाई निश्चित विश्वास प्रणालीमा प्रोग्राम गरिएको छ र यसैले एक ठूलो अवतार समूह 'थिसिस' क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ र अर्को ठूलो अवतार समूह विरोधी-थेसिस क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। तपाईले2तनाव क्षेत्रमा टेलिभिजन गर्न सक्नुहुनेछ। यो न केवल आवश्यक भेदभाव, अराजकता र डर प्रदान गर्दछ, तर यस तथ्यबाट अवतारहरू पनि व्याकुल गर्दछ कि तिनीहरू खेलमा मात्र पर्यवेक्षक हुन्। किनभने सबै झूटा आशाको कारण संघर्षको साथ तपाईले तिनीहरूलाई मीठो राख्नुहुन्छ र तिनीहरू यसको साथ धेरै र अधिक जान्छन्। तपाईं तिनीहरूलाई धार्मिक किताबहरू प्रदान गरेर झूटो आशा दिनुहुन्छ, जुन भविष्यवाणीहरू आउनु भएको छ, त्यसैले तिनीहरू आफैले आफ्नो विश्वास प्रणाली र तिनीहरूको विश्वास प्रणालीको देवतालाई जोड्छन्। तपाईं ती भविष्यवाणीहरू सचिन सक्नुहुनेछ, किनभने तपाईंले खेल बनाउनु भएको छ र यसैले खेलाडीहरूले तपाईंको लिपिको पछ्याउने अवतारहरू राखेर खेल भित्र प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न सक्दछ। तपाईँले पहिले नै खेलको सबै कोड लेख्नुभएको छ जुन खेलाडीले क्रोनिकलजीको लागि खुलासा गर्दछ (जस्तै कि तपाइँ सुरू गर्न प्लेस्टेशन गेम प्ले गर्न सक्नुहुनेछ)। ती खेलका नियमहरू हुन्।
धेरै सङ्केतहरूबाट हामी पछि गर्न सक्छौं कि ती avatars कि खेलाडीहरूले कार्यक्रम हेर्छ र एक निश्चित दिशा मा प्रत्यक्ष देख्न, सबै एक निश्चित इकाई पूजा। यी सरकारका नेताहरू र धार्मिक-नेताहरू-अवतारहरू (जसले खेलको रक्षा गर्ने अवतारहरूका लागि गोपनीय क्लबहरूमा एकताबद्ध गरेका छन्) सबै यस खेलको महान वास्तुकारको उपासना गर्न खोज्छन्। अवर्गीकृत (यस खेलमा पर्यवेक्षकको अनुसन्धान) त्यसपछि लुसिफरको उपासनामा आउँछ। त्यसैले हामी यस खेलको बिल्डर र अभिभावकलाई लुसिफरको रूपमा पहिचान गर्न सक्दछौं। यस साइटमा खोज फिल्डमा त्यो नाम प्रविष्टि गर्नुहोस्, ताकि तपाईंले धेरै समापन लेखहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन निष्कर्षमा पुग्छ।
एकपटक तपाईंले खेल निर्माण गरेपछि तपाइँ पनि खेलमा सबै भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बाइबल, ईश्वर को कुरान, शैतान को देवता हुन सक्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो आत्मा को खेल मा अवतार मा प्रतिनिधित्व र एक अगमवक्ता हो, बी या सी हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो खेल को मुख्य पदहरूमा अवतार द्वारा भित्र भित्रबाट जाँच गरी रहनु भएको छ, र त्यसमा। आखिर, तपाईं खेल बिल्डर हुनुहुन्छ।
सबै धार्मिक पाठकहरूका लागि, मलाई स्पष्ट पार्नुहोस्: शैतान यस कथामा लूसीफर होइन। लुसिफर यस सिमुलेशनको बिल्डर हो (जसलाई हामी आजीवनको रूपमा अनुभव गर्दछौं)। त्यस अनुकार भित्र लुसिफरले भगवान / शैतान, स्वर्ग / नरकको दोहरीवादी मोडेल सिर्जना गर्यो। भगवान / साटन मोडेल लूसिफर द्वारा बनाईएको एक कार्यक्रम हो। यही छुटकारा र स्वर्ग बनाम नरक विरुद्ध हानिको लागि जान्छ। तपाई लसिफरियन वाटरमार्कहरू पहिचान गर्दा मात्र यो देख्नुहुनेछ। यो प्रतीकबाट विशेष देखिन्छ।
सबै धर्महरू यो खेलमा घिमिरे भएका छन्, यरूशलेमका विरूद्ध विरोधाभासहरू मार्फत अन्तिम युद्धको बारेमा ल्याउन। यो वरपर घुमाउँछ समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान, सबै पहलमा। पाप र मृत्युको समस्या: तपाईंको देवतालाई तपाईंको प्राणको समर्पण मार्फत समाधान (जुन सबै धर्मको लागि सधैँ अर्को लुगाफुलमा लुसिफर हुन्छ)। लुसिफरियन दासत्व अन्तर्गत मानवता ल्याउन सबै विश्वका नेता र धर्म दृश्यहरू पछि एकसाथ काम गर्छन्। यो आत्मा मात्र छ यदि आत्माले यसको लागि छान्नु मात्र सम्भव छ र त्यसैले यो अधिकतम भन्दा बढी हुनुपर्छ समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान ताकि मान्छे आफैं आफ्नो धर्म को देवता को हात मा फेंकें (लुप्तफर मा लुसिफर)। अर्को विश्वयुद्ध फेरि फेरि निराशाको एक विशाल भयानक युद्ध हुनेछ (यरूशलेम वरपर) र त्यस अराजकताबाट मसीह अवतार आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ।
किन यो खेल को निर्माता हामीलाई तिनीहरू केवल एक खेल अवलोकनकर्ताले प्राण मा बस्न र तिनीहरूले गोप्य छलछाम मार्फत उहाँलाई आफ्नो प्राण समर्पण गर्न परीक्षा गर्नुपर्छ किन कि भूल गर्न यस्तो लम्बाईहरू गर्न जाने? अब, तपाईं (संभावित) तपाईंको सिस्टम मा शक्ति क्षेत्रहरू सिर्जना एक सम्पूर्ण सेना फसाउन व्यवस्थित गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि तपाईं संग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो अधिकार बाट प्रस्थान एक पटक - - तिनीहरूले निराशा नष्ट छन् यो एउटा उपलब्ध टास्क फोर्स तपाईं आफ्नो अधिकार हो र तिनीहरूलाई विश्वस्त भनेर रूपमा तपाईंलाई बित्तिकै राख्न सक्छ जस्तो छ। तपाईंसँग तपाईको प्रक्रिया मार्फत छ समस्या, प्रतिक्रिया समाधान, सम्पूर्ण खेलले आश्वस्त हुन्छ। तपाईं जस्तै, थिए कि, एक निपटान सेना तपाईंको निपटानमा केवल आफ्नो पाइपहरूमा नृत्य गर्न इच्छुक छ। यसैले हामीलाई यस खेल को माध्यम ले हेर्न को लागि र हामी पनि कि बटन मा छ कि हेर्न को लागि छ। लुसिफर (वा उसको द्वारा बनाईएको देवताहरू: उहाँ आफैं भित्तामा राख्नुहुन्छ) तपाईंको बारेमा केही भन्न को लागी छैन। खेल को माध्यम ले हेर्नुहोस् र आफ्नो मूल संग कनेक्शन को पहिचान (देखें यहाँ).
अगमवक्ता मुहम्मदका चित्रहरू (शान्ति उहाँमाथि) र गेजर्ट वाइल्डर्सका कार्टून प्रतियोगिता
टर्की र ईरान, इजरायलमा भविष्यसूचक आक्रमण र लुसिफेरिया विश्व सरकारको लागि सडक नक्शा
इंद्रधनुष, 'आई एम' 'आई एम्स्टर्डम', LGBTI र र3को बीच प्रतिबद्धता
ट्रान्सगेंडर नाक रिंग: किन यो छ?
ट्याग: डबल, परिक्षण, विशेष, विश्वास, विश्वास प्रणाली, इस्लाम ईसाई धर्म। भगवान, येशू, मोहम्मद, धर्म, अनुकरण, बन्द गर्नुहोस्, टम क्याम्पबेल
30 जुलाई 2018 मा 13: 50
दिलचस्प लेख। अब म आफैलाई एक ईसाई हुँ। मेरो स्थिति हो: धर्म एक जुवा हो र येशू मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ।
म धार्मिक छैन, म क्याथोलिक र / वा प्रोटेस्टेंट छैन। म ख्रीष्टको थुप्रै चर्चहरूको एक सदस्य हुँ।
यस लेख यस सन्दर्भमा यसको पूर्णतामा पनि छ।
सबै धर्म र विश्वास प्रणाली धोखा छ।
बाइबलले मलाई त्यहि कुरा भन्छ।
30 जुलाई 2018 मा 15: 54
बाइबलमा विश्वास प्रणालीहरू को 1 हो जुन म कुरा गर्दैछु।
त्यस सन्दर्भमा JustObserve को प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्।
30 जुलाई 2018 मा 21: 03
ओह हाँ .. बस टेप को लागि देखो कि म्याथ Bellamy यस नयाँ क्लिप मा टेप रिकर्डर को बाहिर खींचती छ
30 जुलाई 2018 मा 15: 27
@ मार्टिन, मैले आफ्नो abbo लागत सेट को माध्यम ले प्राप्त गरेन आदर्श आदर्श पीबी या केहि को माध्यम ले यसलाई हल गर्न को संभावना छ?
लेख 'बाट उद्धरणहरू के तपाईंले थाहा पाउनुभयो कि तपाईंले हेरेको सबै चीजहरू मात्र भौतिक रूपमा राख्दछ?' र
'ठीक छ, यदि तपाईंले आफ्नो प्रणालीमा बल क्षेत्रहरू (सम्भावित) को सम्पूर्ण सेना कब्जा गर्न व्यवस्थित गर्नुभएको छ, त्यसोभए तपाईं यसको साथ केहि गर्न सक्नुहुन्छ।'
मेरो विचारमा, यसको मतलब यो हो कि व्यक्तिगत र सम्पूर्ण मानवता दुवै सामूहिक रूपले आफुले यो खेलको आकार दिन रचनात्मक शक्तिको कम्प्युटिंग शक्ति दिन्छ। मलाई थाहा छैन कि मैले यहाँ पढेको छु कि छैन, तर यसको बारे सोच्नुहोस्: हामी किन एकै दिशामा सबैलाई हान्ने मुख्य आधारमा कति ऊर्जा राख्नुपर्छ? न केवल विचारहरु संग, प्रचार संग, साथ जाँदै छन् आदि। आदि, तर सबै भन्दा शाब्दिक अर्थ मा तपाईं पर्यावरण बाट आफ्नो जैव अवतार गर्न, आफ्नो आफ्नै जेल निर्माण।
वास्तवमा तपाईं आफैले भन्नुहुन्छ मार्टिन: 'धेरै सङ्केतहरूबाट हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि खेलाडीहरू कार्यक्रम हेर्न लाग्छन् र एक निश्चित दिशामा लाग्न लगाउँछन्'
स्पष्ट रूप देखि आचरण आवश्यक छ, राम्रो कुरा म कम से कम बाहिर जान सक्छ कि यो हाम्रो मूल क्षमता को बारे मा केहि भन्छन्। कुन धर्मले बुद्धिमानी गर्ने प्रयास गर्छ?
खेलको उद्देश्य एकताबद्धता हो, बिन्दु जहाँ सृजनात्मक शक्तिहरूले अब तिनीहरूले थाह पाउँछन्, जुन तिनीहरू हुन्, कि तिनीहरू बिल्डरले आफ्नो आफ्नै लक्ष्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी रचनात्मक सेनाहरू प्रयोग गरिने सही लक्ष्य के हो भन्ने कुरा के हो भने 100% निश्चितसँग भने सकिन्छ। अहिले सम्म, म मार्टिनको बयान पाउँछु, मौलिक, प्रायः सम्भावित आक्रमण।
के यो एक शान्तिपूर्ण लक्ष्य हुनेछ भन्न भन्न निश्चित छ। किन रमाइलो यो खेल? जाहिरा तरिकाले हामी मूलमा अन्तिम लक्ष्यको लागि अनुमति दिँदैनौं, तर यो निर्माणको रूपमा श्रीमान वास्तुकारको रूपमा यो तरिका प्राप्त गर्न कल्पना गरिएको थियो।
मार्टिनको लागि अर्को प्रश्न:
केही समय अघि तपाईंले धेरै चीजहरू पहिचान गर्नुभएको संकेत गर्नुभयो जुन तपाईंले Wes Penre सँग लेख्नुभयो। यसबाहेक मैले ट्रान्सहोममेन्ट एडमा आफ्नो पछिल्लो पुस्तकको रूपमा धेरै प्रकारका वेस पेन पेपरमा केहि कागजात पढेको छु
यसमा उहाँ आफ्नो जैव अवतार छोडेर के गर्ने भन्ने एक ठोस संकेतको साथ आउँछ, जसले लोकप्रिय रूपमा मृत भनिन्छ। मैले तपाईलाई सोचेको उत्सुक थियो।
30 जुलाई 2018 मा 16: 04
मलाई अझै थाहा छैन यदि म WesPenre को विचारहरु लाई पूर्णतया सदस्यता लिन्छु। त्यसैले मैले उनीहरूलाई आंशिक जवाफ दिएका केही प्रश्नहरू सोधें। कुनै पनि अवस्थामा, यो खोजीको लायक छ।
मलाई कल्पना छ कि मैले अब पहिलो अनुकार (हाम्रो ब्रह्मांडको बारेमा) वर्णन गरेको छु। सम्भवतः उनको ओरियन प्रणाली त्यो सिमुलेशनको अंशको रूपमा हो र उसले यसलाई अझै देख्दैन। (म दृढ़ताले त्यसो गर्न चाहन्छु)।
तपाईं बस फिल्म स्थापना तुलना र प्राणी (क्वांटम शारीरिक) superposition अवस्थामा छ भनेर मान्छु भने, यो हामी धेरै सिमुलेशन र / वा धेरै "तहहरू" को पनि अस्तित्व मा एक साथ छन् सम्भव छ ।
म व्यक्तिगत रूपमा सोच्छु कि क्वांटम समाविष्कारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
वास्तवमा, म उनको (अज्ञात) थेसिस को आत्माहरु लाई विभाजित गर्ने र अन्य "आत्मा splinters" संग मिश्रण को पनि आश्वस्त छैन। वास्तवमा, म उहाँलाई गल्ती गर्न को लागि छक्क परे जस्तो लाग्यो, यसैले उहाँले मूल हेरफेर हेरोफेरोडाइटको रूपमा बताए। यसले मलाई ट्रांजिग्न्डर आक्रामक गति र यस प्रकारको इंद्रधनुषको सम्झना गर्दछ र यस प्रकार लुसिफर।
चाहे वह जानबूझकर गलत ट्रयाक बनाइए वा बेहोशपूर्वक, एक प्रश्न हो कि म अझै पनि छ। उनको स्रोतको बारेमा उनीहरूको बन्दुकको कारण र (तथापि) च्यानलङहरूमा सन्दर्भहरू, मेरो धारणा छ कि उहाँ एक निष्पक्ष खोजकर्ता हुनुहुन्छ (सम्भवतः) एक भूलभुलैयामा पाठक / श्रोता फिर्ता पठाउन प्रयोग गरिन्छ।
30 जुलाई 2018 मा 16: 45
रचनात्मक क्षमताको बारेमा: हो यो वास्तवमा हाम्रो महान साथी लुसिफर भनेको रुचि हो।
हामीले केवल 1 महत्वपूर्ण मुद्दा बिर्स्यौ: हामी खेल सुधार गर्न र खेलको आदर्श भित्र भित्र हाम्रो जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छौं। यो सोनी प्लेस्टेशन खेल परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ कि नम्रता जस्तो छ, किनकी तपाईंले भर्खरै खेललाई आफैलाई पहिचान गर्न थाल्नुभयो।
तथापि, मलाई लाग्छ कि हामी यस भ्रम को जेल प्रभाव "बाहिर" बाट पुन: लेख्न सक्षम हुन सक्छ, त्यसैले अन्य कैदीहरूले पनि पत्ता लगाउन सक्छन् कि तिनीहरू एक दिमागमा छन् (वा सोही ठाउँ)। यद्यपि यो हाम्रो जैव-अवतारमा एक प्रकारको फायरवाल प्रकार्य सक्रिय छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि, यदि तपाइँ आफ्नो सुपरस्पेस खोज्न र क्वांटम एव्यागमेंटको माध्यमबाट हेर्नु हुन्छ भने यसले यो खेल बाहिरबाट पुन: पुन: प्रकृया सिर्जना गर्न सक्छ। यस अर्थमा हामी लुसिफरको योजनाको लागि ठूलो खतरा हो।
उहाँले त्यो जोखिम लिनु भएको छ किनभने उहाँले हाम्रो आत्माको हेरचाह गर्नुहुन्छ। यसैले उनको एजेन्ट-अवतारहरूले खेलकुद चाँडै जाँच गर्न र गार्डन गर्नु पर्छ। त्यसैले यदि हामी 'जागरण' को बारे मा कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, तब हामी हामीले हेर्छौं र हामी के गर्न सक्छौं। हाम्रो प्राण को मात्रा भौतिक सुपरस्पेशन र मूल संग क्वांटम उत्खनन महत्वपूर्ण हो।
30 जुलाई 2018 मा 19: 03
यस खेललाई सुधार गर्न यस लेखको सम्बन्धमा म पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो मजाक छ कि तपाईं आफैलाई यसको बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्नुहोस्। बिन्दु यो खेल हो कि यो लेखिएको छ (यो अन्तहीन देखिन्छ) यसले प्रणालीमा व्यापक रूपमा भिन्न हुन सक्छ, तर अन्ततः सबैसँग यस्तै समानताहरू लाग्दछन्। किनकि किनकि ती प्रणालीहरूको स्रोत कोड अन्ततः नै यही छ। स्रोत कोड दोहोरो छ। म तिम्रो विरुद्धमा। तपाईंको देश मेरो विरुद्ध। मेरो राजनीतिक प्रणाली बनाम तपाईंको, धर्म बनाम धर्म, के कुरामा फरक छैन।
यसैले यो कुनै पनि प्रयास गर्न को लागी र खेल को टुक्रा को रक्षा गर्न को लागी तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ, जसमा तपाईं जन्मेको वा अन्वेषण गरिएको छ। किनकि तपाईंको भाग सुधार गरेर तपाई स्वचालित रूपमा विपरीत हानिकारक हुन्छ। एक को लागि सफलता सधैं अर्को लागि दुखाइ मा परिणाम।
तपाईं अन्ततः यो सबै एक + हुनुहुन्छ या तपाईं एक Etje, >>>> तपाईं ब्याट्री, प्रणाली खुवाउनुभयो छ निश्चित गर्नुहोस्। <<<< को समानता herein भौतिक मा ध्यान दिनुहोस् हुनुहुन्छ भने, त्यो बिन्दु हो बिजुली गर्न।
यो तथाकथित "व्यावसायिक" खेलाडीहरूलाई प्रभावित गर्न महत्वपूर्ण छ।
यहाँ एक व्यक्तिगत उदाहरण नाम, मेरो उपाय छ कि म राम्रो gamer विचार गर्दछु। एक विशाल सामाजिक जनावर, सबै ठाउँमा प्रवेश कसरी जान्छ, विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको प्रवाह गर्दछ। यसको वाहेक, उदाहरणका लागि, फरुन रक्तलाइनहरू, हाम्रो मित्र विली
तथापि, विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको युद्ध को लागी यो युद्ध आवश्यक छ। "हरेक प्रणालीलाई सुरक्षा चाहिन्छ।" र यो पनि सही 100 प्रतिशत हो। बीचमा तपाईं उहाँका विरुद्धमा हुनुहुन्छ। सायद, म दोहोर्याउँछु।
एक जेसी क्रुजफफले एक पटक यसो भने: 'तपाईले यसलाई हेर्नु भएको बेला तपाईलाई थाहा छ'
अन्त मा म यस भिडियो को पाठकहरु र लेखक को ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु केहि भिडियोहरु को लागि जो स्वर्ण वेब सीरीज को नै निर्माता हो।
संयोग, एथर को भिडियो मा फर्श आइंस्टीन संग बह रहेको छ। धेरै अन्य भिडियोहरूमा यो बारम्बार पनि संकेत गरिएको छ कि बाहिर कुनै पनि सवारहरू छैनन्। तिनीहरूलाई सबै सार्थक भेट्नुहोस्।
हाम्रो मूल हामी duality (समस्या) संग खेल 90%, सामना यसलाई विरुद्ध लडिरहेका भित्र यसलाई (प्रतिक्रिया), यो काम गर्दैन र अन्तिम 10% हामी यो छ को समयमा भूल गरेका सँगै पछि खेल संक्षेप गर्न यसैले थकित छ कि हरेक भुइँ समात्न सकिन्छ। आओ हामीलाई मिश्रण गर्न र 1 सँगै एक साथ बन्नुहोस् र हामी यसलाई एक राम्रो शब्द सिंगलियल्टीको साथ बोलाइदिनेछौं र त्यसपछि भगवान सबै कुरा हुनेछ, र सबैमा (समाधान)
30 जुलाई 2018 मा 23: 14
हो, एकलताता हो, जस्तै यो थियो, हाम्रो नाक को सामने नयाँ स्थानान्तरण सॉसेज, स्वर्ग र धर्म को छुटकारा को लागि। तर वास्तवमा यो त्यहि हो, किनकि मसीह अवतारले ट्राफुमन्युनिस्टिक नैनो-टेक समाधानको माध्यमबाट अनन्त जीवन प्रदान गर्नेछ। र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको निर्माण ... ठीक छ, यो यस भर्चुअल वास्तविकता भित्र वीआर वास्तविकता को निर्माण को कुरा हो, जस्तै रे कुर्जविल यो यति खूबसूरती राख सक्छ।
भित्रबाट यो खेल सुधार गर्न कुनै प्रयोगको छैन। यो साँच्चिकै एक भर्चुअल वास्तविकता हो जसको आधारभूत नियमहरू दैत्यमा आधारित हुन्छन् र वास्तवमा + + र पोलको रुपमा काम गर्दछ। त्यो हो, जस्तै यो, यस भर्चुअल वास्तविकता को लागि आधारभूत सेट। तपाईं खेलबाट कहिल्यै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न; जस्तै एक प्लेस्टेशन खेल अवतार जस्तै "ठीक छ, अब म यस स्तर गुमाउन थकित छु, म भित्रबाट कोड परिवर्तन गर्न जाँदैछु"। यो अभिनय खेलाडी हो - जसले प्रायजसो खेल खेल्ने खेलमा एक निरीक्षक हो - जसले सोनीको सफ्टवेयर विकास विभागमा जान सक्छ, प्रणालीलाई होक र कोड समायोजन गर्न सक्छ।
निश्चित रूपमा प्रणालीको आवश्यक ज्ञान (तपाइँ सोच्न चाहानुहुन्छ), त्यसैले यो यो छ र प्रश्न सोध्छ कि हामी अवलोकन गर्नको स्थितिबाट (मलाई सोच्दछौं)।
समाधान वेस पेनर यो प्रस्ताव हो: यो खेल राम्रो भए पछि खेल मैदान को छोडेर राम्रो हुन्छ (म्याट्रिक्सको ग्रिड द्वारा, यो कल गर्दछ)। तपाईं यहाँ किन आउनुहुनेछ? र किन तपाइँ एक खेल अनुकूलन गर्न चाहानुहुन्छ जुन आत्माको स्वतन्त्र इच्छालाई सम्मान गर्दैन।
यो लाग्थ्यो कि लुसिफर, जस्तै थिए, आत्मा को रचनात्मक शक्ति संग केहि गर्न चाहन्छ। मैले साँच्चै नै मूल तहमा आक्रमण गरेको उल्लेख गरें। यस सन्दर्भमा यो शायद यस प्रणालीमा यो अवलोकन स्थितिबाट हैक गर्न उपयोगी छ। अधिक आत्मा यसबाट आश्वस्त छन्, अधिक मात्रामा उत्खनन शायद आफ्नो काम गर्नेछ। बटनहरूमा (पर्यवेक्षक) त्यसपछि काम गर्न सक्दछ। म विश्वास गर्छु कि हामी सबै एउटै क्यालिबर हो (एउटै प्रोग्रामिंग क्षमताहरू) यस सिमुलेशनको बिल्डरको रूपमा, त्यसैले वास्तवमा हामी आफैलाई कम गर्दैन। यसैले अब म Wes Penre मा विश्वास नहीं गर्छन, तर लाग््छ कि हामी बिच मा फेंकना चाहिए (पर्यवेक्षक स्थिति देखि - वास्तव मा एक समानांतर स्थिति हो, जस्तै कि तपाईं खेल मा अवतार हेर्नुहोस यदि तपाईं वीआर को उपयोग superposition (1 र0साथ): तपाईं चश्मा र साथ प्लेयर / खेल नियन्त्रक धारण गर्ने व्यक्ति) हो भनेर थाह छ।
नियन्त्रणकर्तालाई एकै हातमा राख्नुहोस् र अर्कोसँग स्रोत कोड उठाउनुहोस् र यसलाई पुन: लेख्नुहोस्।
तपाईं साँच्चै लुसिफरको आफ्नो बाटो जान र चाँडै एक अर्ब बलियो अन्धो-राखिएको प्राण सेना छ भने, तपाईं चाँडै मूल तह मा lurch मा बस्नेछ: तपाईं यो खेल बाट कहिल्यै सम्भव छ कि छैन भनेर सोध्न हुनत सफ्टवेयर अनुकूलन गर्नुहोस्। खैर, यदि उसले ती सबै अरबौं आत्माहरूको शक्तिलाई सक्रिय गर्दछ। आखिर, ती प्राणीहरूले 'असाधारण' आफ्नो मूलसँग राखेका छन्। तिनीहरू यो भर्चुअल वास्तविकतामा छन् र मूल तहमा एकै समयमा। त्यसैले यदि तपाईंले उनीहरूका लागि जित्नुभयो (लुसिफरको रूपमा), र तपाइँ आफ्नो पक्षमा उनीहरूको सुपरस्पेस सक्रिय गर्नुहुन्छ, तपाईसँग मूल तहमा एउटा समस्या छ। अनि त्यसपछि यो महत्त्वपूर्ण छ कि छैन, तर यसको बारेमा केही गर्न को लागी।
जागरण आत्मा लेखे:
1 अगस्ट 2018 मा 12: 54
प्रिय मार्टिन, तपाईंको व्याख्या यहाँ मेरो लागि अर्थ हो। मैले भर्खरै हेर्नु भएको छ कि हामी कसरी एक वीआरमा छौं र लगातार प्रोग्राम गरिएको छ। हामी लुसिफरको खेलमा उदासीन छौं। के मैले अहिलेसम्म सही कुरा बुझ्न सक्दिनँ जहाँ हाम्रो मूल स्थित छ। मैले सोधे कि हाम्रो मूल 4D (अक्षीय) मा छ, तर यो अझै पनि Enki / Lucifer को गन्तव्य हो। यद्यपि, तपाईं "भर्चुअल सञ्जाल बाहिर" को बारेमा बोल्नुहुन्छ। मैले त्यो कत्ति र कहाँ देख्नुपर्छ? के तपाइँ हाम्रो "ओभरलुल", हाम्रो उच्च आत्म बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यद्यपि, तपाईं यो खेल भित्र समायोजन गर्न प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, तपाइँ कसरी यो कल्पना गर्नुहुन्छ? तापनि म एकदम सम्बन्ध वेस Penre मा संदेह, र उसको "प्राण patching" सिद्धान्त (उहाँले आयोडीन "स्रोत" जारी गर्न चाहँदैनन् जो गर्छ) हुँ - बाहिर मात्र हामीलाई तर्साउन एउटा सिद्धान्त - तर जहाँ मैले निश्चित रूपमा उनको पछि लागेँ कि यो निर्माण छोड्न राम्रो थियो। के तपाईं पनि मान्नुहुन्छ कि पुरा ब्रह्मांड अनुकरण छ?
1 अगस्ट 2018 मा 13: 06
@ आत्मा उठाउँदै
मेरो नवीनतम लेख पनि पढ्नुहोस् जुन सम्भवतः तपाइँको प्रतिक्रिया पारियो:
म विस पेनरसँग सहमत छैन कि आत्मा पिचिंग, विशेष गरी किनभने उसले यसलाई पुष्टि गर्दैन र उनीसँग अज्ञात स्रोत छ (मेरो YouTube च्यानलमा भिडियो 52 अन्तर्गत मेरो टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्)।
मेरो विचारमा, 4D अनुकरणको अंश हो।
वास्तवमा जहाँ हाम्रो आत्मा आफैमा हुनुहुन्छ आफैलाई व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ यदि हामी यो खेलमा हाम्रो अवतार को स्थिति बाट पत्ता लगाउने प्रयास गर्दछौं। म अर्को लेखमा यसको बारे थप भन्न प्रयास गर्नेछु।
31 जुलाई 2018 मा 00: 16
मानौं हामी एक अनुकार हो। हामीले किन प्रतिरोध गर्न प्रयास गर्नुपर्छ? यसको द्वारा मैले भनेको हो कि मानिसहरूको विरोध। यदि हामी सिमुलेशन नष्ट गर्न चाहन्छौं भने, हामीले सिमुलेशन टाढ्नु पर्छ। यसको अर्थ छ कि हामीले सम्भवतः धेरै निरन्तर अवलोकनहरू गर्नुपर्छ। त्यो सबै अनुकरणको सुपर कम्प्युटर दर्ता गर्नुपर्छ। यदि धेरै समय त्यहिमा गर्छ भने, कम्प्यूटर असफल हुनेछ र हामी यो दुबुल खेलमा भाग लिन हुनेछौं।
म आफैलाई हामी एक क्षणिक जस्तो अनुकारमा बाँच्न सक्दैनौं; बरु ठंड, बेपरवाह सिमुलेशनमा प्रस्तुत 'string theory' द्वारा प्रस्तुत। वास्तविकता यस तथ्यको नतिजा हो जुन केहि पनि गर्न को लागी केहि छैन। हामी त्यो चीज हो र कोहीबाट आएको छैन र कुनै पनि चीजमा अन्त्य हुँदैन, म कंक्रीट, उद्देश्य, वास्तविक जानकारीको बारेमा भन्छु। यससंग केहि केहि गलत छैन, मेरो विषयधनी राय मा।
म कुरा गर्न चाहन्छु कि स्टेफन हकिंग, ब्रेटर सुन् प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको बेला, प्रोजेक्ट Starshot को एक हिस्सा, ब्रह्माण्ड को अनुकरण को बारे मा एक सिद्धान्त मा काम गर्दै थिए। तिनको थेसिस प्रकाशित गर्नु केही महिनाअघि उहाँ मर्नुभयो। शंकास्पद, मेरो विषयपरक विचार।
केवल कंक्रीट, उद्देश्य, तथ्य जानकारी।
31 जुलाई 2018 मा 10: 15
सरस्वती0:. 20 यस क्लिप माइनस जहाँ तपाईं "आफ्नो शरीर छोडेर 'चमक विगतका देख्नुहुन्छ पछि पाठ देख्न रूपमा,' अन्तिम समाधान '(transhumanism र singularity) हामीलाई गाउँछन्।
31 जुलाई 2018 मा 10: 22
मत्ती Bellamy (सरस्वती को नेतृत्व गायक) शायद एक एम अल्ट्रा प्रशिक्षित शीर्ष संगीतकार धेरै राम्रो योजना निर्देशन थाह छ, जो, (जो आफ्नो गीत जो आफ्नो सञ्चालनकर्ता विदाई भन्छन् 'द ह्यान्ड्लर, "साबित गर्न सक्छ) singularity, तर यस तथ्य को पनि हामी पहिले देखि नै अनुकार मा रहछन।
यो विशेष गरी Bellamy पुरानो भिडियो "नक्कली वास्तविकता" शीर्षक देखि एक टेप खींचती जो यो भिडियो क्लिप प्रस्ट छ। सम्पूर्ण क्लिप पनि simulative वास्तविकता उहाँले पाता र उहाँले आफ्नो नयाँ वास्तविकता मा आवश्यकताबारे एक सानो पुरानो जमानाको मानव लिए कि गाउँछन् जो, (transhumanist दृष्टिकोण, हामी ऐ मार्फत यो 3D नयाँ सिमुलेशन मा निर्माण हुनेछ जो देखि) को प्रतिनिधित्व एक प्रकारको छ।
31 जुलाई 2018 मा 10: 24
सरस्वती पहिले नै पुरानो विश्वास प्रणाली को 'अन्तिम समाधान' द्वारा प्रतिस्थापन गरिनेछ गाउँछन्
31 जुलाई 2018 मा 12: 32
विश्वव्यापी ट्राफेनम्युनिस्ट राज्य
31 जुलाई 2018 मा 10: 33
ईमेलको माध्यमबाट अर्को राम्रो प्रतिक्रिया:
यो पहिले नै 2000 साल पहिले ज्ञात भएको थियो !! एन2कोर 4: 18
"सबै पछि, हामी हाम्रो आँखामा हेरेका कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दैनौं, तर हामीले देख्नुहुने चीजहरूमा; हेरेका कुराहरूका लागि पल को हो (भ्रम), तर देख्ने चीजहरू अनन्त छन्। "
तपाईं सबै धर्म सबै स्याटर्न / बेबिलोनबाट descended छन् क्रस / टामुज / स्याटर्न, त्रिएकको / Baylon (निम्रोदको), चर्च, टावर (obelisks) सहित मारिया / ASTARTE, बच्चा येशूले / टामुज आदि आदि भन्न जब वास्तवमा, तिमी सही हो
सायद तपाईंलाई ईसाई धर्म दिइयो जुन तपाईंले अचम्म अचम्म लागेका थिए ....
तपाईंले अहिले सम्म एक कुराको प्रयास गर्नुभएन र यो फेरि जन्मेको छ!
जोह 3: 3-9 हेर्नुहोस्
नयाँ सृष्टि बन्नु छैन; यो अनुमति छैन र तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्न। आदि सबैलाई अनुमति मलाई अनुमति छ, तर सबै चीज उपयोगी छ ... भित्रबाट तपाईं यस संसारको लागि र भित्रबाट पूर्ण रूपमा फरक देख्नुहुनेछ तपाईं फरक फरक कुराहरूसँग फरक फरक हुनेछ र होइन लगाईयो!
त्यसपछि मात्र शाब्दिक यो म्याट्रिक्स बाहिर कदम सक्नुहुन्छ ... र त्यहाँ आफ्नो जीवनमा आशा छ ... नयाँ जीवन अद्भुत "अनुभव" को पूर्ण, म मार्क 16 वर्णन रूपमा कसैले र रोग को उपचार मा मेरो हात राख्नु रूपमा: 16-18
सबैको लागि फेरि जन्मेका लागि!
म आफैलाई इभान्जलिकल प्रणालीबाट आयो र मैले पायनियर स्कुलको टोर्बेन एस हेर्न खोजेको थिएँ
तपाईं एक विशाल शोधकर्ता हुनुहुन्छ, त्यो पनि नोट गर्नुहोस्!
मैले पुनरुत्थानको प्रयास गरेँ, तर यो केवल एक सम्मोहन थियो। पुन: जन्मनु अघि, हामी पहिला ट्राफेनम्युमममेन्टको पर्खाइ पर्दछ र निश्चित रूपमा यो 3dimensional5अर्थ-सिमुलेसन भ्रम भित्र हुने हुन्छ। "परमेश्वरले" मानवतालाई नयाँ शरीर दिनुहुनेछ र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी बनाउनुहुनेछ। मलाई लाग्छ "ईश्वर" ले यसका लागि www, न्यानोटेक र एआई प्रयोग गर्नेछ र क्लाउडमा यो नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीको सेवा गर्नेछ; सहित, अवश्य, नयाँ शरीर। त्यसोभए अवतार मसीह चाँडै आउनेछ; हामी ट्रयाक मा राम्रो तरिकाले गर्न को लागि सिंगलुलर जाल मा लिप्त हो।
हामी सिर्फ superposition फेरि जन्मन गर्न आवश्यक छैन, तर र इन्ट्याङ्गलमे हामीलाई मूल आत्म पहिचान र हामी बाइबल परमेश्वरको वा कुरान परमेश्वर (मा नै को सेवा मा परमेश्वरको hebben.Je प्राण आवश्यक छैन भनेर हेर्न छुट्याउनुहोस्) तपाईले गरिरहनुभएको सबै भन्दा राम्रो चीज हो। तपाईं लाभ उठाउन यो आपत्ति छैन वा पश्चात्ताप गर्न (जो प्राण नियन्त्रण टाढा दिने जस्तै वास्तवमा धेरै छ) किनभने तपाईँले हराएको कहिल्यै (कहिल्यै कहिल्यै छैन)। त्यो यस भ्रम / सिमुलेशन / खेलसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो।
त्यो म कसरी देख्छु।
31 जुलाई 2018 मा 13: 37
उहाँले आकाशमा राख्नुभयो (क्लाउड)
उहाँले छोड्नुभयो उहाँ फिर्ता आउनुभयो (क्लाउड मार्फत)
31 जुलाई 2018 मा 19: 58
मानिसहरूलाई कस्ता फाइदाहरू वा फाइदाहरू (जस्तै जस्तै) कलाको बारेमा जान्न सकिन्छ कि हामी अनुकरणमा बाँच्न सक्छौं? तिनीहरूले कसरी यो सिके र तिनीहरूले यो कसरी व्यवहार गरे (यो एक गुप्त छ)
31 जुलाई 2018 मा 21: 45
सोनी प्लेस्टेशन सोच्नुहोस्, खेल विचार गर्नुहोस्, अवतार सोच्नुहोस्, प्रोग्रामरले आफ्नो इनपुटलाई अवतारमा राख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ
19 अक्टोबर 2018 मा 18: 52
मेरो लागि केहि प्रश्नहरू छन्:
पहिलो प्रश्न: के तपाईं लक्कैफरको जेल बाहिरको ब्रह्मांड एक नक्कल / भर्चुअल वास्तविकता हो?
दोस्रो प्रश्न: तपाईंको लेखमा तपाईं क्रमबद्ध गर्न वा जगेडा गर्न को लागी अरुलाई सामूहिक रूपमा बाहिरबाट प्लग हटाउनुहोस्। यो 'जगेडा' अन्य समस्यामा एक फरक छ। उदाहरणको लागि, म प्रायः मेरो प्रेमीसँग कुराकानी गरेको छ र उसले यो एक्सएनएक्सएक्सए जाल मन पर्छ। म उसलाई उनको योजना को रूप मा नहीं देख सकता। त्यसोभए, के तपाईलाई सम्भव छ कि सबै को लागी प्लग को लागी सम्भव छ?
तेस्रो प्रश्न: त्यसैले, मलाई जेलबाट बचाउनको लागि क्वांटम समाविष्कारको प्रयोग गर्ने विचार मनपर्छ? बाहिरको कोड कसरी पुन: लेख्ने?
अन्तिम प्रश्न: साथै मैले कहिलेकाहीँ हामीले कोड छैन। कृत्रिम खुफिया (AI) को विचार गर्नुहोस्। यो आफ्नै मा सिकिरहेको छ। अन्ततः यो स्मार्ट हुन जानेछ र चीजहरू आफैले बाहिर जान्छ र यही कारणले हामीलाई यो के गर्न सक्दैन। के तपाईं भित्र भित्र ह्याक गर्न को लागी एक तरीका छैन? यहाँ स्पष्ट छ कि प्रश्न: भित्रबाट कसरी हटाउने हो?
धेरै प्रश्नहरूको लागि माफ गर्नुहोस्। तर म खुसी छु कि त्यहाँ मैले मेरो विचार साझा गर्न सक्छु। म तपाईंको प्रतिक्रिया र छलफलको सराहना गर्दछु। धन्यवाद।
19 अक्टोबर 2018 मा 19: 58
प्रश्न सोध्नको लागी कुनै समस्या छैन।
मलाई लाग्छ तपाईंको प्रश्नहरू यस विषयको बारेमा अन्तिम लेखमा जवाफ दिइएको छ:
कृपया पढ्न र मलाई थाहा दिनुहोस् कि यदि तपाइँका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ वा मलाई अझै थप स्पष्टीकरण दिन आवश्यक छ भने।
« नेदरल्यान्डको राष्ट्रिय चुनावको सर्वश्रेष्ठ प्रचारक: जोसेफ गोबिल्स पुरस्कार
हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न हामी के गर्न सक्छौं? एक दूरी मा डरावनी कार्रवाई! »
कुल भ्रमण: 13.765.804
जनतालाई बेवास्ता गर्दा तपाईं कसरी सरकारलाई परिवर्तन गर्न जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्छ?
नाइट्रोजन समस्या के हो, किसानहरू किन गुनासो गरिरहेका छन् र किन गति घटाईरहेको छ?
शट वकिल फिलिप Schol र गलत अपहरण रिपोर्ट Schiphol
मार्टिन भिजल्याण्ड op जनतालाई बेवास्ता गर्दा तपाईं कसरी सरकारलाई परिवर्तन गर्न जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाई किन यो जान्न चाहानुहुन्छ? op जनतालाई बेवास्ता गर्दा तपाईं कसरी सरकारलाई परिवर्तन गर्न जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्छ?
Riffian op पहिलो चरण लेबलिंग हो, दोस्रो चरण बहिष्कार हो: खोप बटन
1.681 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्